Fiatrehana fifidianana atao… | NewsMada
Par Taratra sur 17/11/2021
Mafanafana ratsy indray ny tontolo politika amin’izao? Tsy mahagaga, mahazatra… Ankatoky ny fifidianana izao, ka samy manao izay ho afany sy efany amin’izay hiatrehana izany. Ny antoko na vondrona politika mpiray donak’afo omaly, ohatra, manomboka samy maka ho azy amin’izao: tsy ananan-kavana ny raharaham-pirenena amin’ny fakana fanjakana? Na samy te hitsapa hery, samy miady ho lohany… Ady fiady?
Ao indray ireo nifanenjana sy nifanenjika hatramin’izay, mampiady tadin-dokanga ho azy amin’izao. Te ho tsara imason’ny mpitazana? Na mahatsiaro ho kely hery ka mila namana, na te hanao tohatra fiakarana ny hafa… Izy avokoa izany? Politika io, tsy inona fa izay hahazoana fahefam-panjakana ihany. Miara-dalana ho azy amin’izany ny kazaran-dresaka rehetra io: fandokadokafan-tena, fanabokabokana ny hafa.
Amin’izany rehetra izany, mila ho difotra ao anatin’ny ady saritaka tsy hita lany ny marina. Izay miteny rehetra tsinona, toa babany avokoa: mitompo teny fantatra, mihevi-tena ho zavatra… Tsy vitan’izay, rehefa mafanafana ratsy toy ny ratsy ataon-kavana ny raharaha: mivadika ho fifandranitana, fifanasana vangy, fifanenjehana… Sanatria, izay ve ilay hoe tsy filaminana sy tsy fitoniana mialoha ny fifidianana?
Tsy fifidianana tsinona no ketrehina sy atrehin’ny sasany amin’izao fa fanakorontanana ankitsirano fotsiny izao: famohazana fota-mandry, famendrofendroana, fampitahorana amin’izay ahina hitranga… Vokatr’izay heverina sy kendrena ary ataon’ny tena fa tsy inona? Toy ny hoe tsy roa aman-tany tokoa ny loza hitranga, raha tsy arahina sy tanterahina izay kasain’ny tena amin’itsy sy iroa… hahazoana vahana.
Raha ny fifidianana no tena imasoana na izay hahatsara sy hahatomombana izany no kendrena, tsy tokony hiraraka ompana ny karazana tolo-kevitra mitondra ho amin’ny fitonian-tsaina fa tsy fampitahorana? Tsy maninona, na efa miroso amin’ny fanelezana foto-kevitra sy fandaharanasa tsara lavitra no ho izay ataon’ny mpitondra amin’izao hoe tsy mahomby. Tena fiatrehana fifidianana ve no atao amin’izao?